Tale Jeneralin'ny orinasa Valve malaza any Canada mitsidika ny orinasa Titan Valve ho an'ny Ball Valve sy ny Production Valve-Company News-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika anay)
Tale Valve Company Canada malaza mitsidika ny orinasa Titan Valve ho an'ny Ball Valve sy ny vavahady Valve Production
Fotoana: 2020-10-09 Hits: 64
Vao tsy ela akory izay ny CEO an'ny orinasa Valve malaza Canada Valve sy ny mpiasa ao aminy dia mitsidika ny orinasa Titan Valve ho an'ny famokarana baiko baolina sy vavahady.
Titan Valve dia manome serivisy baolina sy valizy vavahady OEM ho an'ny tsena amerikana avaratra mihoatra ny folo taona. Amin'ity indray mitoraka ity dia manolotra volo baolina 2000x-n hexagon kofehy ho an'ny mpanjifa izahay. Ny fitsapana ny valizy rehetra ary diniho ny API 598 na ny fitsapana hidro na ny fitsapana ny rivotra. Ny valiny Titan dia mampihatra fitsapana 100% isaky ny filaminana sy valva rehetra. Ankoatr'izay, ny valizy baolina tokana rehetra dia misy fitsapana amin'ny alàlan'ny fitaovana manokana hahazoana antoka fa marina sy malama ny fifandraisana.
Ny fiaraha-miasa dia nanomboka tamin'ny taona 2006 ary mitazona io fifandraisana akaiky io nandritra ny taona maro ary nahafa-po ny mpanjifa ny vokatra sy serivisy Titan valizy. Mba hanatsarana ny fahatokisan-tena ho an'ireo mpampiasa farany sy valva titan dia voamarin'ny SGS ho an'ny fananana mekanika ara-mekanika mafy indrindra izay tsy maintsy mahafeno ny fenitra ASTM A105 sy ny NACE MR0175.
Titan Valve dia mitazona kalitao avo lenta ary manohy manome valizy baolina eran-tany sy vavahady vavahady ho an'ny tsena manerantany.
Taloha: Ny mpanjifa afovoany atsinanana dia mitsidika ny orinasa Titan Valve hijerena ny valizy ho an'ny tetikasa solika sy gazy any Irak